special event - Thabyay Education Foundation
The Politics of National Identity in Myanmar
Nyein Nyein Pyae | Moe Thway | Htoo Htet Naing
No.9Kan Street, Hlaing Township, Yangon
Htoo Htet Naing,afellow in the Peace Leadership and Research Institute, works asaProject Officer at Search for Common Ground, an international non-profit organization withamission to transform the way the world deals with conflicts. Asafellow in the PLRI, her research focuses on conflict and reconciliation in Northern Rakhine. Htoo Htet Naing graduated from the Liberal Arts Program of Myanmar Institute of Theology withaBachelor’s Degree in Social Studies.
Moe Thway is Co-Founder and President of Generation Wave. Formerly, he was the Secretary General of National Youth Congress, where he was able to raise youth participation in national building in Myanmar. He is known for his involvement in saffron revolution as an individual demonstrator. Together with other youth members, Moe Thway is active in his work on human rights and peace issues.
Nyein Nyein Pyae isaJournalism Mentor at the Internews. She worked asajournalist for9years, observing Myanmar's transition from military regime to hybrid military-civilian government. She has been covering politics, civil war, peace process, ethnic-politics, geopolitics, foreign affairs, civilian-military relations and national reconciliation in Myanmar. She previously worked asapolitical analyst at Embassy of Japan in Myanmar.
အကြောင်းအရာမိတ်ဆက် -- နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစား ရာမှာ အဲဒီနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင် ကြတဲ့နိုင်ငံသားများ တနည်းအားဖြင့် လူမျိုးတစ်မျိုး သို့မဟုတ် လူမျိုးများရဲ့ ဘုံကြန်အင်လက္ခဏာကို ဘယ်အရာပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဘယ်လို သတ်မှတ်တာ လဲဆိုတာ အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ nation building နဲ့ state building ကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး အစပြု ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
Nation building ကတော့ လူမျိုးဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အသိနဲ့အဲဒီအသိကိုနားလည်လက်ခံလာအောင် တည်ဆောက်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်၊ လူမျိုးများစုစည်းပြီးတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးတစ်ခုတည်ထောင် တာမျိုးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ လူမျိုးစုများကိုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အရည်အတွက်အားဖြင့် နဲတဲ့ လူမျိုးစုငယ်တွေဟာအရည်အတွက်အားဖြင့်များသော လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး အခြားသော လူမျိုးစုငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့နဂိုမူလကြန်အင်လက္ခဏာတစ်ချို့ ပြောက်ကွယ်သွားရတာမျိုးရှိသလို သူတို့ရဲ့ အမည်နာမ ပါပျောက်ကွယ်သွားရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
အချို့နေရာတွေမှာတော့ လူမျိုးစုတွေအားလုံးက သူတို့ တစ်စုချင်းစီရဲ့ အမျိုးသားကြန်အင် လက္ခဏာတွေပျောက်ပျက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ အားလုံး စုပေါင်းပြီး ပုံသဏ္ဍန် အသစ်တစ်မျိုးနဲ့ ဖြစ်တည်လာကြတာမျိုးလည်းရှိသလို အဲဒီလူမျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းမှု ကနေမှ ပထ၀ီအ၀န်းအ၀ိုင်းတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နေရာဒေသအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး နိုင်ငံသားနာမည်ကို ခံယူကြတာမျိုး လည်းရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်ခြင်းထက် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို ဦးစားပေး တယ်ဆိုတဲ့ သဘောလို့ဆိုရမှာပါ။
လက်ရှိကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး (national reconciliation) နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့အတွက်ကို အပတကုတ်ကျိုးစား နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ မှီတင်း နေထိုင်ကြတဲ့ အများပြည်သူလက်ခံနိုင်မည့် အုပ်ချုပ်မှုစနှစ်နဲ့ နိုင်ငံအသစ်တစ်နိုင်ငံကို ဘယ်လိုတည် ဆောက်ကြမှာလဲဆိုတဲ့ state building process ကိုဖြတ်သန်းနေကြတာလို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဘယ်လိုစုဖွဲ့မှု ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ တည်ဆောက်မှာလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တစ်ခုစဉ်းစားတာက ခုနကပြောတဲ့ national identity ကြန်အင်လက္ခဏာ ကိစ္စပါ။ collective national identity ဒါမှမဟုတ် common national identity ဆိုတဲ့ဘုံကြန်အင်လက္ခဏာ တစ်စုံကို မတည်ဆောက်ပဲနဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။
ဒီကနေ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ national identity ကဘာတွေလဲ၊နိုင်ငံကိုခေါ်ဆိုတဲ့ အမည်နာမနဲ့ နိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေက နားလည်လက်ခံထားတဲ့ အမည်နာမ တစ်ထပ် တည်းကျသလား၊နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ကာလမှာ ဒါတွေဟာ ဘယ်လိုအရေးပါသလဲ ဘယ်လောက်အထိအရေးပါသလဲ ဆိုတာတွေကို အခုလက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက် တွေရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီး စဉ်းစားဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြောဆိုသုံးစွဲတဲ့ စာပေ ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှု အစရှိတဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း အလျှဉ်းသင့် သလိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ အင်မတန်နှက်နဲကျယ်ပြန့်ပါ တယ်၊ အဖြေမှန်တစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတာမျိုးထက် မတူညီတဲ့ နားလည်မှုတွေ အမြင်တွေ ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံပြီး အမြင်တွေကိုဖလှယ်တဲ့ အဆင့်ကနေ ဘုံနားလည်မှု ဘုံရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားသွားကြရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကျနော်တို့ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲလေးကို အစပြုလိုပါတယ်။